अभिनेता सहित कुनै पनि सार्वजनिक व्यक्ति, लागि, मात्र प्रतिभा, करिश्मा, आकर्षण धेरै महत्वपूर्ण छन्। रूप र शारीरिक डाटा सीधा आफ्नो inimitable तरिका को गठन असर गर्छ। Dzhonni Depp एक प्रमुख उदाहरण हो। आज, कारण अभिनेता को लोकप्रियता उसलाई प्रशंसक र प्रशंसक हजारौं जस्तै हुन चाहन्छु। र मात्र होइन व्यवहार पनि उपस्थिति र विकास Dzhonni Deppa धेरै आदर्श जस्तो देखिन्छ।
मेगा अभिनेता ओयन्सबोरो को सानो सहरमा जुन 9, 1963 मा जन्म भएको थियो, केंटकी। को नाभाजो र चेरोकी को कुल - यो मात्र होइन आइरिस र जर्मन जरा, तर पनि भारतीय छ। जनी को बाल्यकाल र युवा अधिकांश फ्लोरिडा मा पारित। आमाबाबुले छोडपत्र गर्दा पन्ध्र पुरुष व्यवहार शायद सकारात्मक सकिन्छ। उहाँले, विद्यालय जाँदै रोकियो अक्सर लागूपदार्थ चासो देखाए। मान्छे चाहन्थे मात्र कुरा गर्न - यो संगीत छ। उहाँले धेरै रक बैंड प्ले। तिनीहरूलाई को एक Iggy पप लागि खोल्ने कार्य रूपमा पनि काम गरे।
अभिनेता गरेको शिल्प मा Dzhonni Deppa को वृद्धि संग बैठक पछि, 1984 मा सुरु निकोलस केज। पहिलो सानो भूमिका तिनीहरू सबै समय को एक शानदार हरर फिल्म प्ले थियो "Elm सडक मा दुःस्वप्न।" तर ध्यान धेरै अभिनेता टेलिभिजन श्रृंखला मा काम, 1987 मा सक्षम थियो आकर्षित गर्न "21 जम्प सडक।" प्रारम्भिक 90 का मा, Depp भेटे Timom Bertonom। "चार्ली र चकलेट कारखाना," "एड Vud," "एडवर्ड Scissorhands," "निद्रा लागेको खोक्रो" र, पाठ्यक्रम, "एलिस: आफ्नो संयुक्त काम को एक परिणाम फिलिमहरु" बेडा सडक को प्रेत नाई, Sweeney टोड "देखा रूपमा Wonderland मा। " त्यसपछि कुनै कम सफल चित्रकला थिए: "मृत मानिसको," "क्यारेबियन को डाकू", "नवौं गेट", "चकलेट", "Donnie Brasco", "द रम डायरी" र अरूलाई।
को पाठ्यक्रम, विभिन्न वर्ण को फ्रेम मा प्रस्तुति को लागि, सधैं मूल्य र वजन Dzhonni Deppa छ। सबै पछि, वर्ण को धेरै toned र सेक्सी हेर्न मानिन्छ थिए। यस सन्दर्भमा, अभिनेता नियमित अभ्यास र आफ्नो वजन हेर्न छ।
त्यसैले बस Dzhonni Depp को पचास सबैभन्दा सुन्दर अमेरिकी पत्रिका मान्छे द्वारा दुनिया मा मान्छे को सूचीमा 1996 र 2001 मा मारा छैन योग्य। र 2009 मा उहाँले वर्तमान समय मा sexiest मानिसहरूको सूची लाग्यौं।
हामी अभिनेता को बाह्य डाटा कुरा भने, हामी विकास र Dzhonni Deppa छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले 175 सेन्टिमिटर छ र लगभग 70 किलोग्राम वजन। यो मानव शरीर अनुपात को स्तर बैठक रूपमा छलफल गर्न सकिन्छ।
तर, तपाईं अफवाहहरु विश्वास भने, अभिनेता सधैं शरीर को मापदण्डहरु सन्तुष्ट छ। जनी अक्सर सार्वजनिक मा जूता मा मंच मा वा एउटा सानो एडी उपस्थितिको, अक्सर उच्च टोपी लगाएका देखिन्छ। यहाँ तथ्य हो र detractors विभिन्न speculations लागि कारण भएका छन्।
शानदार बावजुद व्यावसायिक वृद्धि Dzhonni Deppa वास्तवमा को डाली मा, त्यो अन्य गतिविधिहरु र सोख धेरै छ। उदाहरणका लागि, साथ यूहन्ना Malkovich र Shonom Pennom तिब्बती मानिस रे भान्सा संग क्लब-रेस्टुरेन्ट मालिक हो।
धेरै वर्ष पछि अभिनेता संगीत बनाउन किशोर भूल भएको छैन। जनी दुई पटक त्यो दल बेलायत बाट "ओएसिस" रेकर्ड। र बेलग्रेड मा एक तिहार मा 1992 मा, त्यो सर्बिया, साथै देखि Partybreakers समूहसँग एउटै मञ्चमा कुरा Emir Kusturica र जिम Jarmusch।
1997 मा, जनी आफूलाई उहाँले "Palme d'अथवा" मा उम्मेदवार मनोनीत थियो जसको लागि फिल्म "बहादुर", निर्देशक रूपमा साबित भयो।
यो बुझ्न गाह्रो छ पनि आज सार्वजनिक थप रुचि छ कि छैन: Dzhonni Depp आफूलाई - अभिनेता गरेको उचाइ र वजन, भारी वर्ण, सहन नसकिने व्यवहार, वा आफ्नो प्रदर्शन मा inimitable वर्ण। तर वास्तवमा रहन्छ - यो मात्र आफ्नो मातृभूमि मा अत्याधिकै लोकप्रिय छ, तर संसारभरि।
Ramzan Kadyrov शो "आवाज को तारा प्रस्तुत। बच्चाहरु कार
यूराल "मालपुवा" मैक्सिम Yaritsa। रचनात्मकता र जीवनी
Fatma सुल्तान र उनको खेलेका टर्की अभिनेत्री, Meltem Cumbul
दाना Borisova अघि र प्लास्टिक पछि। फोटो
तपाईं के एक ड्रायर थाहा छ?
को "एक्सेल" मा काम के हो?
कार पर्श 918 Spyder को एक सिंहावलोकन
मरेका प्राण: जीवन मृत्यु पछि